TokenCard စျေး - အွန်လိုင်း TKN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို TokenCard (TKN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ TokenCard (TKN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ TokenCard ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $7 241 489.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ TokenCard တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
TokenCard များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TokenCard TKN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.557TokenCard TKN သို့ ယူရိုEUR€0.474TokenCard TKN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.427TokenCard TKN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.511TokenCard TKN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr5.02TokenCard TKN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.53TokenCard TKN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč12.41TokenCard TKN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.09TokenCard TKN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.741TokenCard TKN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.779TokenCard TKN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$12.49TokenCard TKN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.32TokenCard TKN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3TokenCard TKN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹41.55TokenCard TKN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.93.85TokenCard TKN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.765TokenCard TKN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.848TokenCard TKN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿17.34TokenCard TKN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.87TokenCard TKN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥59.29TokenCard TKN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩660.33TokenCard TKN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦214.15TokenCard TKN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽40.7TokenCard TKN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴15.37
TokenCard TKN သို့ BitcoinBTC0.00005 TokenCard TKN သို့ EthereumETH0.00147 TokenCard TKN သို့ LitecoinLTC0.0103 TokenCard TKN သို့ DigitalCashDASH0.00636 TokenCard TKN သို့ MoneroXMR0.00645 TokenCard TKN သို့ NxtNXT44.13 TokenCard TKN သို့ Ethereum ClassicETC0.0827 TokenCard TKN သို့ DogecoinDOGE168.06 TokenCard TKN သို့ ZCashZEC0.007 TokenCard TKN သို့ BitsharesBTS21.2 TokenCard TKN သို့ DigiByteDGB18.17 TokenCard TKN သို့ RippleXRP1.98 TokenCard TKN သို့ BitcoinDarkBTCD0.0195 TokenCard TKN သို့ PeerCoinPPC1.87 TokenCard TKN သို့ CraigsCoinCRAIG257.81 TokenCard TKN သို့ BitstakeXBS24.13 TokenCard TKN သို့ PayCoinXPY9.88 TokenCard TKN သို့ ProsperCoinPRC70.99 TokenCard TKN သို့ YbCoinYBC0.000304 TokenCard TKN သို့ DarkKushDANK181.42 TokenCard TKN သို့ GiveCoinGIVE1224.57 TokenCard TKN သို့ KoboCoinKOBO128.9 TokenCard TKN သို့ DarkTokenDT0.513 TokenCard TKN သို့ CETUS CoinCETI1632.73